Manantena ny hivarotra singa 20 tapitrisa amin'ny Honor 9X sy 9X Pro | i Honor Androidsis
Avo ny fanantenana: Honor dia manantena ny hivarotra singa 20 tapitrisa mahery an'ny duo Honor 9X vaovao
Tamin'ny 23 Jolay, ny vaovao afovoany Honor 9X andiany. Ireo fitaovana ireo dia nahatonga ny olona rehetra nanana ny tsirony tsara teo am-bavany, ary izany dia antenaina hivarotra tsara tokoa eo amin'ny tsena manerantany.
Na dia misy antenaina tsara momba ireo telefaona ireo aza, ireo an'ny Honor no avo indrindra hitantsika. Misy singa 20 tapitrisa izay antenain'ny mpanamboatra sinoa handefa azy io ihany, tsy isa kely.
Tamin'ny andro fandefasana an'ity finday smartphone ity dia nanaiky tafatafa manokana tamin'ny media ny filoha Honorary Zhao Ming. Ny sasany amin'izy ireo dia nanontany momba ny varotra Honor any ivelany, izay novalian'ilay tompon'andraikitra ambony Ny varotra tany ampitan-dranomasina dia tsy nisy fiantraikany tamin'ilay tafio-drivotra namely an'i Huawei.
Zhao Ming dia nilaza hoe: “Tamin'ity taona ity dia sendra toe-javatra manokana iray izahay. Ny tanjaky ny varotra ataontsika any ivelany ankehitriny dia niverina tamin'ny fanjakana tsara kokoa noho ny talohan'ny 16 Mey. Ny varotra isan-kerinandro sy ny varotra isan'andro dia ambony noho izany, ny ekipantsika iray manontolo […] Ny rafitra dia fihetsika tena miabo. Na inona na inona zava-mitranga, ny rafitra Huawei iray manontolo, ny mpiasa Huawei rehetra dia mazoto be ary ny tsirairay dia mitsiky hiatrika ny zava-drehetra.
Amin'ny teny hafa, Ny varotra voninahitra any ivelany dia nijanona tsy nianjera ary nitombo haingana. Izany koa dia nanamafy ny fampahalalam-baovao vahiny teo aloha momba ny "fitomboan'ny vola miditra ao Huawei manodidina ny 30% amin'ny tapany voalohan'ny taona." Ny politikan'ny sazy amerikana dia nanambara ny fatiantoka, ary Huawei sy Honor dia tsy nisy fiantraikany firy taorian'ny nahazoany azy ireo, na dia mbola tsy voa ihany koa aza.
Ho fanampin'izay, nilaza i Zhao Ming fa misy ny adihevitra marobe ao anatin'ny Honor momba ny vidin'ny Honor 9X: "Noho ny vidin'ny Honor 9X, dia nilaza koa izahay, nandritra ny fifanakalozan-kevitra anatiny, fa tsy dia masiaka loatra ity vidiny sy ny herin'ny vokatra ity. Nanampy izany izy ny varotra andrasana amin'ity andiany ity dia farafaharatsiny 20 tapitrisa unit, 5 tapitrisa mahery noho ireo izay nahavita namidy ny andian-dahatsoratra Honor 8X hatramin'ny roa herinandro lasa izay, vola izay tratra taorian'ny efa herintaona lasa izay.
Na dia toa avo sy sarotra tratrarina aza ireo isa ireo, dia tsy heverinay ho hadalana ny tanjona, ary na dia kely kokoa aza izany raha raisinay ireo fiasa tena tsara natolotry ny fitaovana vaovao. Tsarovy izany el Kirin 810 dia ampy fitaovana ao amin'izy ireo, ary antenaina handray ny mpanjifa ity processeur finday manome fanantenana be ity ny mpanjifa noho ny fikajiana sy fahaizany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Avo ny fanantenana: Honor dia manantena ny hivarotra singa 20 tapitrisa mahery an'ny duo Honor 9X vaovao
Ny tena sary an'ny Vivo Z5 dia manambara fa manana fiampangana haingana 22.5 watt izy
Android Pie dia ho tonga amin'ny Xiaomi Mi 6 amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao